Himalaya Dainik » जुन २१ मा पृथ्वी ‘ध्वस्त’ हुने दावी !
जुन २१ मा पृथ्वी ‘ध्वस्त’ हुने दावी !
दक्षिण अमेरिकी देशका प्राचिन माया सभ्यतामा प्रयोग हुने गरेको क्यालेन्डरलाई लिएर विगतका कयौं बर्ष देखि भइरहेको दावीमा एक अर्को थपिएको छ । पृथ्वी वि’नासलाई लिएर मानव मस्तिष्क धेरै नकारात्मक छैन । केही बर्ष अगाडीको एक सर्वेक्षणले आधुनिकिकरण र विकाससँगै मानवमा नैरास्यता पनि त्यतिकै बढेको देखाएको थियो ।
यो आ त्मह त्या जस्ता घटनामा बृद्धी, कहल, ह/त्या हिँ/साजस्ता सामाजिक विकृतीमा उल्लेखनिय बृद्धी हुनुको कारण बनेको छ । यी बिकृतीहरुबाट टाढा रहेकाहरुमा पनि जीवनशैली प्रति असन्तुष्टी पर्याप्त देखिएका छन् ।
त्यतिबेला बर्षमा ११ दिन कम भएको थियो । यो ११ दिन सुन्नमा अत्यन्तै कम लागेपनि २ सय ८६ बर्षमा यो लगातार बढ्दै
त्यसैले उल्लेखनिय संख्यामा मानिसहरु पृथ्वी ध्व’स्त हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्छन् र त्यसलाई लिएर अनेक कुराहरुलाई जोडेर यसको भविष्यवाणी गर्ने वा सिद्धान्तहरु अगाडी सारिरहेका हुन्छन् । छुद्रग्रह, प्लानेट एक्स, विश्व यु’द्ध, भु’कम्प, महामा’री रो’गब्याधी जस्ता पक्षहरुलाई पृथ्वीको विना’ससँग जोडेर अगाडी सारिरहेका हुन्छन् ।
यसैक्रममा अहिले को’रोना महासं’कटबीच जुन २१ मा विश्व समाप्त हुने दावी उनीहरु गरिरहेका छन् । कोरोना महासंक’टका बावजुद अझै सबैभन्दा खराब समय आउन बाँकी नै रहेको उनीहरुले भनेका छन् । यो ताजा दावीले मानिसहरु धेरै त्रसित भइरहेका छन् भने इन्टरनेटमा यो हल्लाले ब्यापक स्थान पाइरहेको पनि पाइरहेको पनि छ ।
वैज्ञानिक पाओलोले आफनो ट्विट हटाए । तर उनको ट्विटपछि मानिसहरु सन् २०२० जुन २१ वास्तवमा सन् २०१२ डिसेम्बर २१ भएको बताइरहे
टगलोगुइनले आफनो ट्विटमा भनेका छन्, जुलियन क्यालेन्डर यदि अपनाइरहेको हो भने हामी प्राविधिक रुपमा यो बर्ष २०१२ मा छौ ं । ग्रगोरियन क्यालेन्डरमा जानाले हामी एक बर्षमा ११ दिनको नोक्सान भएको छ । ग्रेगोरियन क्यालेन्डर लागु भएको २ सय ६९ बर्ष (१७५२ देखि २०२०) बितिसकेको छ । यसलाई यदी ११ गुणा गर्ने हो भने २ हजार ९ सय ४८ दिन हुने छ । २ हजार ९ सय ४८ दिन बराब ८ बर्ष हुन्छ ।
यद्यपी पछि वैज्ञानिक पाओलोले आफनो ट्विट हटाए । तर उनको ट्विटपछि मानिसहरु सन् २०२० जुन २१ वास्तवमा सन् २०१२ डिसेम्बर २१ भएको बताइरहेका छन् । सन् २०१२ मा पनि यसतै दावी गरिएको थियो र डिसेम्बर २१ मा विश्व अन्त्य हुने भनिएको थियो । उक्त दावी सुमेरिअनहरुले काल्पनिक खोज गरिएको ग्रह निबिरुमा आधारित थियो ।
उनीहरुका अनुसार उक्त रहस्यमय ग्रह पृथ्वी तर्फ बढिरहेको छ । सुरुमा सन् २००३ मे मा पृथ्वी ध्व’स्त हुने दावी गरिएको तर नभएपछि यसको तिथि बढाएर सन् २०१२ डिसेम्बर २१ पुर्याइएको थियो । तर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले यो दावीमा कुनै विश्वसनिय वैज्ञानिक आधार नभएको जनाएको छ । यस प्रकारको दावी फिल्म, किताब र इन्टरनेटमा मात्र सिमित रहेको छ । यो समाचार नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ ।